चीन 36 '' नीलो तालिका तालिका निर्माता र आपूर्तिकर्ता - JTL धातु
३ '' 'निलो सौंदर्य तालिका
36 '' कालो सौंदर्य तालिका
46 '' नीलो सौंदर्य तालिका
४ '' 'कालो सौंदर्य तालिका
हाइड्रोलिक ग्रूमिंग टेबल
इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग ग्रूमिंग टेबल
स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा
Multifunction छत कुकुर टोकरा
धातु छत कुकुर पिंजरा
धातु प्लेट छत कुकुर केनेल
खरगोश हच केज
घरपालुवा जनावर सीढीहरु
२ कदम काठ पाल्तु जनावर सीढीहरु
३ कदम काठ पाल्तु जनावर सीढीहरु
4 कदम काठ पाल्तु जनावर सीढीहरु
रातो गार्डन काठ बर्डहाउस
रंगीन काठ बर्डहाउस झुण्डिएको
देश Cottages काठ Birdhous
बाहिरी रातो काठ बर्डहाउस
घर > उत्पादनहरु > ग्रूमिंग टेबल > ३ '' 'निलो सौंदर्य तालिका
45 '' भारी ट्रेड स्टेनलेस स्टील कुकुर दुई ट्रे संग कुकुर
४ .6 ..6 '' कालो व्यावसायिक भारी शुल्क इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग ग्रूमिंग टेबल
36 '' हतियार संग कालो Grooming टेबल
समायोज्य ऊँचाई 36 "कालो सौंदर्य तालिका
Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादनहरु कारखाना एक पेशेवर निर्माता र पालतू पशुहरु को मेज र चीन मा कुकुर बक्से को आपूर्तिकर्ता हो। हामी पाल्तु जनावर उत्पादनहरु, स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरु र अन्य धातु उत्पादनहरु को उत्पादन मा विशेषज्ञता। हाम्रो ग्रुमिंग टेबल दुई मुख्य रंगहरु छन्, ३ 36 '' नीलो ग्रूमिंग टेबल र कालो ग्रूमिंग टेबल सहित। हाम्रा उत्पादनहरु मुख्य रूप यूरोपीयन र अमेरिकी बजार र जापानी बजारहरु लाई बेचिन्छ।
कुकुर लाई ३ '"नीलो पोशाक तालिका मा राख्नुहोस् कुकुर हानिकारक खाना, जस्तै चकलेट, प्याज लसुन, आदि खान बाट बच्न सक्छ यी कुकुर को शरीर मा एक ठूलो क्षति छ।
३ '' 'नीलो कवच तालिका MDF प्यानल र गैर पर्ची रबर, अत्यधिक गैर पर्ची, कम खरोंच, सफा गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ। टेबल खुट्टा स्टेनलेस स्टील ट्यूब, बलियो र टिकाऊ, जंग छैन प्रयोग। धातु समर्थन फ्रेम त्रिकोणीय संरचना डिजाइन, अधिक स्थिर र बलियो छ। र एक बलियो धातु भण्डारण ट्रे संग।
३ '' 'हतियार clamps Noose र ट्रे संग नीलो तालिका
चाहे तपाइँ एक कुकुर पेशेवर पेशेवर हुनुहुन्छ वा तपाइँ मात्र पैसा बचाउन वा उनीहरुलाई तनाव बाट बच्न घर मा तपाइँको आफ्नै कुकुरहरु लाई दुल्हन गर्नुहुन्छ, तपाइँलाई काम गर्नको लागी सही किट चाहिन्छ। हाम्रो भारी शुल्क तैयार तालिका तपाइँको पाल्तु जनावर को लागी महान छ। यो एक ठोस निर्माण छ कि जंग-प्रतिरोधी इस्पात बाट बनेको छ, तपाइँ घरपालुवा जनावरहरु को सुरक्षा को लागी टेबल रिब्ड रबर सतह मा आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रीमियम गुणस्तर तालिका संग, तपाइँ नुहाउन, ट्रिमिंग, सुख्खा, सज्जा वा अन्य तपाइँ चाहानुहुन्छ सजीलै संग तपाइँको कुकुर वा बिरालो पुग्न सक्नुहुन्छ। यो ३ '' 'हतियार clamps फन्दा र ट्रे संग नीलो मेज तालिका एक मजबुत निर्मित, पेशेवर-क्यालिबर उत्पादन हो कि दुबै शौकिया र पेशेवर groomers समान सूट हुनेछ।
तपाइँको सहयोग को लागी तत्पर।
३ '' 'एक ट्रे संग नीलो ग्रूमिंग टेबल
चाहे तपाइँ एक पेशेवर groomer वा एक सामयिक एक हो, तपाइँको घर मा तपाइँको कुकुर सज्जा, एक ट्रे संग ३ '' 'नीलो grooming टेबल एक उपकरण हुनुपर्छ। कपाल काट्ने, नुहाउने वा गम्भीर सौन्दर्य कार्यहरु को लागी न nail काट्ने जस्ता आधारभूत गतिविधिहरु बाट शुरू, घरपालुवा जनावर तालिकाहरु अपरिहार्य छन्। तपाइँको कार्य धेरै सजिलो, सुविधाजनक, र जाहिर छ, छिटो हुन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाइँको कुकुर स्थिर र सुरक्षित रहन्छ त्यसैले तपाइँ तपाइँको चिन्ताहरु लाई खाली गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चीन मा तपाइँको दीर्घकालीन साझेदार बन्ने आशा गर्दैछौं।
हामीलाई छान्नुहोस्, तपाइँको अंतरंग दाई! तपाइँको सहयोग को लागी तत्पर।
36 "दुई Nooses संग नीलो तालिका तालिका
चाहे तपाइँ एक पेशेवर groomer वा एक सामयिक एक हो, तपाइँको घर मा तपाइँको कुकुर को सज्जा, 36 "दुई nooses संग नीलो सौंदर्य तालिका एक उपकरण हुनुपर्छ। कपाल काट्ने, नुहाउने वा गम्भीर सौन्दर्य कार्यहरु को लागी न nail काट्ने जस्ता आधारभूत गतिविधिहरु बाट शुरू, घरपालुवा जनावर तालिकाहरु अपरिहार्य छन्। तपाइँको कार्य धेरै सजिलो, सुविधाजनक, र जाहिर छ, छिटो हुन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाइँको कुकुर स्थिर र सुरक्षित रहन्छ त्यसैले तपाइँ तपाइँको चिन्ताहरु लाई खाली गर्न सक्नुहुन्छ।
३ '' 'चार clamps संग नीलो तालिका तालिका
चाहे तपाइँ एक पेशेवर groomer वा एक सामयिक एक हो, तपाइँको घर मा तपाइँको कुकुर सज्जा, चार clamps संग ३ blue '' नीलो grooming टेबल एक उपकरण हुनुपर्छ। कपाल काट्ने वा गम्भीर सौन्दर्य कार्यहरु को लागी न nail काट्ने जस्ता आधारभूत गतिविधिहरु बाट शुरू, हाम्रो कार्य धेरै सजिलो, सुविधाजनक, र स्पष्ट रूप मा, पाल्तु जनावरहरु को तालिका संग छिटो हुन्छ। राम्रो गुणस्तर र व्यावहारिक डिजाइन, यो महान घरपालुवा जनावर हेरचाह तालिका याद नगर्नुहोस्!
३ '' 'नीलो व्यावसायिक Foldable सौंदर्य तालिका
किन हाम्रो सौन्दर्य तालिका छनौट? कुकुर हाम्रो सबैभन्दा नजिकको साथी हो। यो 36 '' नीलो पेशेवर foldable सौंदर्य तालिका तपाइँको पालतू कुकुर वा बिरालो को लागी महान छ। यो तपाइँको घरपालुवा जनावर को उचाई उठाउनेछ ताकि तपाइँ उसलाई नुहाउन, ट्रिमिंग, सुख्खा, सज्जा वा अन्य चीजहरु तपाइँ गर्न चाहानुहुन्छ सजीलै पुग्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो उत्पादन ठीक डिजाइन गरीएको छ र टेबल रिब्ड रबर सतह मा छ जुन तपाइँको बच्चा घरपालुवा जनावरहरु को लागी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
हाम्रो साझेदार बन्नुहोस् र हामीलाई सँगै हाम्रो व्यापार विस्तार गर्न दिनुहोस्। तपाइँको सहयोग को लागी तत्पर।
36 '' हतियार संग नीलो तालिका
यहाँ व्यावहारिक र टिकाऊ 36 "हतियार संग नीलो सौंदर्य तालिका को एक प्रकार हो कि तपाइँ र तपाइँको पालतू जनावर संग मायामा पस्नुहुनेछ। स्टेनलेस स्टील खुट्टा र जाल भण्डारण रैक संग घरपालुवा जनावर तालिका! यो तालिका 120kg/264.6lb सम्म को एक उच्च क्षमता संग एक ठोस संरचना द्वारा बनाईएको हो। यो सजीलै अस्थायी भण्डारण को लागी एक कम रैक संग आउछ। स्लिप प्रुफ र ग्रूमिंग टेबल मा स्क्र्याच प्रूफ सतह घरपालुवा जनावरहरु लाई स्थिर राख्न को लागी सुनिश्चित गर्दछ। साथै, सजीलै भण्डारण र टेबल को उपयोग बाट बाहिर छ जब बचत को लागी टेबल को संक्षिप्त गर्न खुट्टा। घरपालुवा जनावर सौन्दर्य तालिका स्वेच्छाले हात उचाइ समायोजन को लागी 8 तनाव knobs शामिल छ। राम्रो गुणस्तर र व्यावहारिक डिजाइन, यो महान घरपालुवा जनावर हेरचाह तालिका याद नगर्नुहोस्!
एक पेशेवर चीन ३ '' 'निलो सौंदर्य तालिका निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, यदि म थोक गर्न चाहन्छु, तपाइँ मलाई के मूल्य दिनुहुन्छ? यदि तपाइँको थोक मात्रा ठूलो छ, हामी कारखाना price.You प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरको बिक्री र हामी बाट चीन मा बनेको उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु लाई आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य! हाम्रो उद्धरण कम छ। छुट किन्नको लागी स्वागत छ ३ '' 'निलो सौंदर्य तालिका। अधिक जानकारी को लागी, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाइँ बिक्री लक्ष्य समाप्त रकम वितरक को आवश्यकता छ?
कति दिन तपाइँ उपकरण स्थापित गर्न को लागी आवश्यक छ?
ठेगाना: नम्बर १, लेन 79,, सिमिंग ईस्ट रोड, हाइशु जिल्ला, निing्बो शहर, झेजियांग प्रान्त, चीन
प्रतिलिपि अधिकार 21 २०२१ Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादन कारखाना - ग्रूमिंग टेबल, स्टेनलेस स्टील कुकुर टोकरा, धातु छत कुकुर पिंजरा - सबै अधिकार सुरक्षित।